Iimpazamo ezi-9 ezibulalayo ezenza iiSayithi ziCothe | Martech Zone
9 Iimpazamo ezibulalayo ezenza iiSayithi ziCothise
NgoLwesine, uJanuwari 11, 2018 NgoMgqibelo, uJanuwari 13, 2018 Douglas Karr
Ukucotha iiwebhusayithi Ukuhlawula amaxabiso, amaxabiso okuguqula, kunye neyakho i-rankings injini. Oko kwathethileyo, ndiyamangaliswa linani leziza ezihamba kancinci kancinci. Adam undibonise indawo namhlanje eyabanjwa kwiGoDaddy eyayithatha ngaphezulu kwemizuzwana eli-10 ukulayisha. La mntu ulihlwempu ucinga ukuba bagcina isibini semali ekubambeni… endaweni yoko baphulukana neetoni zemali kuba abaxhamli beenkonzo bayabheyila kubo.
Sikukhulisile ukufundwa kwethu apha, kwaye andithandabuzi ukuba enye impumelelo ibikukufudukela kwethu FlywheelUmphathi weWordPress olawulwayo ene-caching enkulu kunye nefayile ye- Inethiwekhi yokuThumela kuxhaswa yi I-StackPath CDN.
Nazi iimpazamo ezi-9 ezibulalayo ezonyusa ixesha lakho lokulayisha:
Akukho Caching -Iqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho isebenzisa i-Caching ukwandisa isantya. Iinkqubo zangoku zokulawulwa kwemixholo zigcina umxholo ngaphakathi kwiziko ledatha kwaye uzidibanise kunye neetemplate zoyilo ukuvelisa iphepha elikhutshwayo. Isicelo sedatha kunye nokupapashwa kubiza kakhulu, ke iinjini zokugcina i-caching zigcina imveliso ngesixa sexesha eliqhelekileyo ukuze kungabikho mibuzo ifunekayo.
Ulungelelwaniso oluninzi kakhulu -Kuphephe ukusebenzisa izixhobo ezingaphakathi ezibhekisa kwamanye amaphepha. Kwaye usebenzise amakhonkco ngokuthe ngqo kuhambo lwakho. Umzekelo omnye kukuba indawo yakho ikhuselekile, ufuna ukuqinisekisa yonke into ekule ndawo, njengemifanekiso, ayithunyelwanga kwi-URL yabo engakhuselekanga. Oko kuya kufuna ukuba yonke imifanekiso ekwiphepha iqondiswe ngokufanelekileyo kwikhonkco elikhuselekileyo.
Akukho Minification -Ifayile yeSkripthi kunye nobukhulu befayile yeCSS bunokucinezelwa ngokunciphisa izinto ezingafunekiyo (njengokutya kwemigca, ukugqabaza, iithebhu kunye nezithuba.Ukususa ezi zinto kuthiwa Ukucoca. Ezinye iinkqubo ze-CMS zinokukwenza ngokuzenzekelayo oku njengokulayisha kwesiza kunye neenqolobane.
Imifanekiso emikhulu -Abasebenzisi bokugqibela bahlala befaka imifanekiso ngqo kwikhamera okanye kwifowuni kwiwebhu… ingxaki kukuba ezi ngxaki zihlala zii-megabytes ezininzi. Yongeza iqela kwisiza kwaye indawo yakho iya kuncipha kakhulu. Izixhobo ezinje Kraken inokusetyenziswa ngaphambi kokulayisha imifanekiso- okanye idityaniswe kwisiza ukucinezela imifanekiso ngokuzenzekelayo ukuze ijongeke intle kodwa ibe nesayizi encinci yefayile.
Amaqhosha oLuntu eNtu -Amaqhosha okuzalwa asekuhlaleni ayoyikeka. Ngamnye kubo ulayishwe ngokuzimeleyo kwiziko losasazo lwentlalo kwaye ingqwalaselo encinci ihlawulwa kwindlela abalayisha ngayo ngokukhawuleza. Zama ukusebenzisa iinkonzo zomntu wesithathu eziza kuthi ziphucule kakhulu ixesha labo lokulayisha- okanye ulayishe amaqhosha emva koko angachaphazeli isantya sendawo yakho konke konke.
Akukho CDN - uthungelwano lokuhambisa umxholo luneeseva kwihlabathi lonke ezigcina kwaye zihambise iifayile ezimileyo kufutshane nendawo nganye. Sebenzisa i CDN yindlela emnandi yokwandisa isantya sephepha lakho, ngakumbi ukuba kukho imifanekiso emininzi.
Nantsi infographic, Iingcebiso ezili-9 zokunciphisa ixesha lokulayisha iphepha, ukusuka TruConversion.
Ukubhengezwa: Ndisebenzise amakhonkco ethu okudibana kuyo yonke le post.
Ungajonga njani, ususe, kwaye ukhusele iMalware kwindawo yakho yeWordPress